Renegades | शीर्ष स्लट साइट | Mobile Casino Online | £€$800 Deposit Bonus :)
Renegades एक नेत्रहीन आकर्षक छ स्लट बेलायत बोनस NextGen गेमिङ द्वारा जारी स्लट. यो कथा बताउँछ5विभिन्न eras र दुनिया देखि महिला वर्ण, जसले अद्भुत क्षमता र उपलब्धिहरू लागि उल्लेखनीय छन्. यो स्लट बेलायत बोनस स्लट एक मनोरंजक गेमप्लेको एक शानदार विषय र केही स्मरणीय एनिमेशन प्रतिज्ञा जो छ. यो स्लट बेलायत बोनस न्यूनतम सबै उपकरणहरू र £ 0.30 र £ 60.00 क्रमशः अधिकतम बाजी मा नाटक छ.
आउनुहोस् र यो स्लट बेलायत बोनस मा राम्रो WINS कमाएँ!!
यो स्लट सुविधाहरू5रील,3पङ्क्ति र 243 जो WINS मेल खाने वा यस्तै प्रतीक रूपमा लामो सिर्जना गरिनेछ भन्ने हो सम्भव विजेता तरिका बायाँ तर्फ बाट सुरु भएको आसन्न रील छन्. पनि, को towering हिमालहरूको पृष्ठभूमिमा प्रतीक त तेर्सो वा ठाडो विस्तार उत्पन्न गर्न सक्छन् जो मा भएको रील complements. वास्तबमा, तिनीहरूले पनि आदेश थप विजेता संभावित प्रदान गर्न ठूलो3×3प्रतीक रूपमा देखा पर्न सक्छन्.
यो स्लट comprises5उच्च मूल्य प्रतीक जो5ladies from across the time such as Raffaela Blaze, चयन Dragonslayer, Harries Hellstorm, आइवी Sabreclaw र Freya (भलहल्ला को Valkyrie). र, तल्लो मान प्रतिनिधित्व गर्दै5रंग रत्न.
जंगली प्रतिमा सुनको 'जंगली' एक चिसो नीलो रंग बोनस प्रतिमा बाहेक विजेता संयोजन गठन गर्ने अन्य सबै प्रतीक लागि खडा हुनेछ रूपमा मान्यता छ. पनि, प्लेयर गरेको खम्बा 250x को एक Jackpot smartly यो स्लट बेलायत बोनस प्ले द्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ.
इनामदायी बोनस विशेषताहरु
कुनै पनि स्पिन मा, दुई वा तीन आसन्न रील लक र त्यसपछि मेगा प्रतीक प्रदर्शन गर्न सँगै अप स्पिन हुनेछ. खेलाडी जो उच्च अप गर्न तीन प्रतीक र मार्फत तीन रील छन् मेगा प्रतिक प्राप्त हुनेछ! यसरी, यो बस उन्नत WINS तिनीहरूलाई प्रदान गर्नेछ.
यो रील मा कहीं तीन वा बढी नीलो बोनस प्रतीक राख्दै ट्रिगर हुनेछ. अब, आठ मुक्त spins सुरुमा खेलाडी दिइनेछ. यी spins समयमा, मात्र 1 महिलाहरु पनि wilds र बोनस प्रतीक सहित अन्य सबै प्रतीक संग सँगै रील मा उत्पन्न हुनेछ पाखण्डी को. पनि, थप spins यो राउन्ड समयमा तीन थप बोनस प्रतीक प्राप्त गरेर ट्रिगर गरिनेछ. यसरी, खेलाडी कुल मा नि: शुल्क spins सोह्र सम्म प्राप्त गर्नेछन्.
Renegades संसारभरि एक ठूलो दर्शक द्वारा प्ले छ आकर्षक स्लट छ. यसलाई शीर्ष गुणवत्ता ग्राफिक्स र ठोस ध्वनि समावेश. यो पनि प्रभावशाली बोनस सुविधाहरू केही विशाल जीत अनुमतिको प्रदान गर्दछ. यसरी, यो एक RTP संग एक उच्च volatility स्लट छ 96.37%.
Shangri-ला को कथा: क्लस्टर Pays ™